I-8 yezigidi zabucala zeeprofayili zeGitHub ezivuza inethiwekhi | Iindaba zeGajethi
I-8 yezigidi zabucala zeeprofayili zeGitHub ezivuza inethiwekhi
Amaninzi amaqela athi, nokuba abonise izakhono zawo eluntwini okanye ngokuthe ngqo ekufumaneni izibonelelo zoqoqosho, azinikele ekuzameni kungekuphela nje ukubetha phantsi iiseva, kodwa ukwaphula ukhuseleko lwabo kunye nokufumana zonke iintlobo zedatha ebuthathaka enokuthi iqulethe. Eli xesha kufuneka sithethe ngobusela obenziwa kwiqonga elaziwayo GitHub Apho amasela akwazile ukubamba nto ngaphantsi Iiprofayili zabucala ezizizigidi ezisi-8.
Njengoko kuhlala kunjalo, olu hlobo lweakhawunti lubonisa ubuninzi beenkcukacha zabucala kunye nolwazi lomntu ngabasebenzisi, ngelishwa bonke le datha ihluziwe Uninzi lwabasebenzisi beli qonga likhethekileyo labaphuhlisi kunye neengcali zekhompyuter ngokubanzi, banokubona ukuba iiakhawunti zabo zonakalisiwe.
Uhlaselo lweGitHub lwaphelela ekubeni kubanjwe ngaphezulu kwe-8 yezigidi zabucala.
Ngokusekwe kwiingxelo ezenziwe ngu UTroy ukuzingela, UMlawuli weSithili seMicrosoft:
IGitHub inerekhodi entle yokujongana neziganeko zokhuseleko, kungekuphela nje ngokuba namava amaninzi nabo, kodwa nangendlela abaqhubene ngayo nabo. Ixesha elingaphezulu banokuninzi, ngamanye amaxesha baphendule kakuhle kwaye ngamanye amaxesha benze njenge firewall kwisoyikiso esikhulu.
Ngaphandle kwento abaninzi abanokuyicinga, ukuvuza akubanga ngaphakathi kwiphepha. Abasebenzisi abaninzi bayazibuza ukuba ngaba ikwayiloo webhusayithi ityhila ulwazi, kodwa ayisiyiyo.
Njengoko ufunda kwezi ngxelo, ayiloxesha lokuqala ukuba iqonga lihlaselwe lolu hlobo kwaye ayiloxesha lokuqala ukuba ulwazi lwabasebenzisi beGitHub lukhutshelwe kwinethiwekhi, ke abo banoxanduva kufuneka baqwalasele ngakumbi kwi iziphene zokhuseleko eneqonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-8 yezigidi zabucala zeeprofayili zeGitHub ezivuza inethiwekhi
Ezi zezona smartphones zinamandla kwintengiso yenyanga ye-Okthobha ngokwe-AnTuTu
U-Elon Musk linyathelo elinye kude ekuhambiseni uthungelwano lwe-Intanethi lwehlabathi